Tag: calaamado | Martech Zone
Tag: sumad dhul
Axad, Juun 23, 2006 Arbacada, February 10, 2016 Douglas Karr
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ugu dambeyntii arko maqaal su'aalo ka keenaya qaababka uu Jack Welch u wacdiyo. Waxaan aaminsanahay inuu yahay mid aan ka fiirsan, macangag ah, danaysi iyo hunguri badan. Wuxuu kaliya ku guuleystey samaynta macaamiisha iyo shaqaalaha dhib. Isaga kaliya ayaa laga yaabaa inuu guuleysto, laakiin waxay ahayd kharashka kuwa kale oo badan oo laga badiyay. Waxaan caawa u kaxeeyay guriga waxaanan ka fikirayay goorta aan u shaqaynayay Isgaarsiinta Landmark. Farxad weyn ayaan u helay la kulanka Frank